सन्दीपले लेखे दिल्लीबाटै आफ्ना नेपाली फ्यानहरुलाई यस्तो सन्देश ! पढ्नुहोस् | Citizen FM 97.5 Mhz
Home > खेलकुद > सन्दीपले लेखे दिल्लीबाटै आफ्ना नेपाली फ्यानहरुलाई यस्तो सन्देश ! पढ्नुहोस्
सन्दीपले लेखे दिल्लीबाटै आफ्ना नेपाली फ्यानहरुलाई यस्तो सन्देश ! पढ्नुहोस्
वैशाख ४, इन्डियन पिमियर लिग आईपीएलमा नेपाली युवा क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने आबद्ध दिल्ली डेयरडेभिल्सले अाफ्नो चौथाे खेल आज कोलकता नाइडराईससँग खेल्दै छ । सन्दीपले आज सामाजिक संजाल फेसबुकमा स्टाटस राख्दै विश्वभर रहेका सबै क्रिकेट प्रेमिकालाई धन्यवाद दिएका छन् ।
नेपाली खेलाडी सन्दीप लामिछाने अाबद्ध भएसङ्गै नेपाली क्रिकेटप्रमिले याे सिजनकाे अाइपिएल र दिल्लीकाे खेललाई महत्वका साथ हेर्ने गरेका छन ।
सन्दीपको फेसबुक पोस्ट:
प्रम ओलीका छिमेकी यी बालकले गित गाएर सबैलाई पारे चकित ! भिडियोसहित
गल्छी–त्रिशूली सडक अब दिउँसोमात्र बन्द हुने
१८ सय ५१ कर्मचारीको माग
यी हुन्, अमेरिकालाई लात मारेर नेपाल फर्केका ७ नेपाली कलाकारहरु !